Cameron.....: March 2011
ဒါ.... ကျမ... ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နေခဲ့တဲ့ အိမ်ပါ....။ အိမ်က နှစ်ထပ်အိမ် အရှေ့ပိုင်းကို ခေါင်မိုးမမိုးပဲ ဖလက်ခင်းထားတာပါ.....။ ငယ်ငယ်တုန်းက မိုးတွေရွာလာရင် လူကြီးတွေမသိအောင် တက်တက်ဆော့ခဲ့ဖူးတယ်...။ အိမ်ရှေ့က ကိုင်းကျလာတဲ့ ကုက္ကိုပွင့်တွေကို ခူးခူးဆော့ဖူးတယ် အဲဒီပေါ်ကနေ...။ အနောက်ဘက်မှာ အုတ်နံရံတစ်ချပ်ကျန်ခဲ့တယ် ..။ အဲဒီမှာ မြင်နေရတဲ့ ပြူတင်းပေါက်က အဖိုးရဲ့အိပ်ခန်းပဲ...။ ခုလိုအဖြစ်မျိုးမြင်ရတာ မယုံနိုင်စရာပါပဲ.....။ မနက်မိုးလင်းတိုင်း အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို အိပ်မက်တစ်ခုလိုပဲ ထင်နေမိတယ်...။ အဖြစ်အပျက်ညကများဆိုရင် တကယ်ရင်ဆိုင်နေရသူတွေ ဘယ်လောက်များ သွေးပျက်နေကြမလဲ...။ မြေကြီးကွဲအက် မြည်ဟီးသံ တိုက်ပြိုတဲ့အသံ လူတွေ အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေမယ့်အသံနဲ့ တကယ့် လောက ငရဲပါပဲ.....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့ အိမ်လေးကို နှမြောတသ လွမ်းဆွတ်နေမိတော့တယ်....။ ပို့စ်တွေရေးတဲ့ အထဲမှာ ဒီပို့စ်ကိုရေးရတာ ရင်အနာဆုံးပဲ....။ ရင်ဘတ်ထဲ နုံးခွေနေတယ်...။
အခြားအခြားသော ရွာတွေမှာ ငလျင်ဒဏ်သင့်သူတွေ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင် အစားအစာ သောက်ရေတွေလိုအပ်နေပါတယ်...။ အကယ်၍များ လှူဒါန်းလိုတယ်ဆိုရင် coralnyo@mail.com ကျမရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်....။ တာချီလိတ်မှာ ရှိတဲ့ ကျမမောင်လေးတစ်ဝမ်းကွဲက လိုအပ်မယ့် ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးဖို့ကိုလဲ အကူညီတောင်းထားပါတယ်...။ လောလောဆယ်အချိန်မှာတော့ သူလည်း အိမ်ပြိုအိမ်ပျက်တွေရှင်းလင်းရေးမှာ လုပ်အားပေးကူညီနေပါတယ်...။ ရရှိလာမယ့် အလှူငွေ နဲ့ ပစ္စည်းများကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ကျမဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်ပေးမှာပါ...။ ခုလို အလှူမျိုးကို တစ်ခါမှ မကောက်ခံခဲ့ဖူးပါဘူး...။ ခုက ကျမကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မသွားရောက်နိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်တာလေးကို လုပ်ပေးချင်တာပါ...။ ကုသိုလ်ဖြစ်ပါဝင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကို နိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်...။
နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ ပို့စ်မှာလဲ အလှူခံထားတာတွေ့ပါတယ်....။ နီးစပ်ရာ အလှူခံထည့်လို့ရပါတယ်...။ မြန်မာပြည်မှာ စိုင်း... စကာင်္ပူမှာ ဘွိုင်းဇ်.... အမေရိကားမှာ နိုင်းနိုင်းတဲ့....။
Posted by coral nyo at 06:13 15 comments:
ရာသီဥတုက မှုန်မှိုင်းအေးစက်လို့..... နေရာတိုင်း မီးခိုးရောင် နှင်းမြူခိုးတွေထနေတယ်...။ ကိုယ့်ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာတော့ တံမြက်စည်းပင်ရှည်တွေက ကိုယ့်အရပ်နဲ့ရွယ်တူ... တချို့အပင်တွေက ကိုယ်ထက်တောင်ရှည်နေပါသေးတယ်...။ လေအေး တစ်ချက်ဝေ့လိုက်တိုင်း...နှင်းစက်မှုန်လေးတွေက ကိုယ့်ပါးပြင်ကို စူးခနဲလာထိမှန်ကြတယ်...။ ဒီလိုအရောင်...ဒီလိုအေးစိမ့်မှု... ဒီလိုနေရာလေးကို ရောက်လာတာ...ဟိုးးး ငယ်စဉ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်ပြီး အမှတ်ရစေတယ်..။ အဲဒီတုန်းက ဆောင်းရာသီ နှင်းတွေပိန်းပိတ်နေအောင်ကျတုန်းက... ဒီလိုမီးခိုးရောင်မှိန်မှိန်တွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူလှတယ်...။
ဂါဝန်ဖါးဖါးနဲ့ အနွေးထည်ခပ်ပါးပါးတစ်ထည်တည်း... ခေါင်းကိုတော့ ပုဝါခြုံထားရင်း... ခြေလှမ်းတွေ ရှေ့ဆက်သွား နေကြတယ်..။ လမ်းတလျှောက် နှင်းမှုန်လေးတွေနဲ့ တံမြက်စည်းပင်အဖျားတွေက လေတိုက်တိုင်း ကိုယ့်ကိုလာပြီး ကလူကျီစယ်နေကြတယ်...။ တံမြက်စည်းပွင့်တွေမှာ အရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ ပန်းသွေးရောင်လေးပါနေသလိုပဲ...။ ဒါပေမယ့်လည်း ပန်းရောင်တော့မဟုတ်ဘူး...။ ငွေမှင်ရောင်လေးမှာ ပန်းဖျော့ရောင်လေးရောစပ်ထားတဲ့ အရောင်မျိုး...။ ကိုယ်အဲဒီအရောင်မျိုးကို သိပ်ကြိုက်တာ...။ ခု...ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ ချည်ဂါဝန်အရောင်လေးနဲ့ မသိမ်းမယိမ်းပဲ...။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တော့ နှင်းတွေအရမ်းကျနေလို့လား တိမ်တွေကိုလည်း မမြင်ရပါဘူး...။ တခါတခါ... နှင်းပွင့်ကလေးတွေ လင်းခနဲ လက်ခနဲ အရောင်တွေကိုတော့ မြင်နေရသလိုလို...။ ကိုယ်စီးထားတဲ့ ပိတ်ဖိနပ်လေးနဲ့ ဂါဝန်အနားစတွေက နှင်းတွေနဲ့စိုထိုင်းစပြုနေပြီ...။ အင်းလေ.... ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ ကိုယ်ဘယ်တုန်းကတည်းက ခရီးနှင်ခဲ့သလဲ??? ဟင့်အင်း.... ကိုယ်မမှတ်မိတော့ဘူး....။ ပြီးတော့ ... ကိုယ်အခု...ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ????
ဟော....ရှေ့နားမှာရေစီးသံတွေ တဝေါဝေါကြားနေရတယ်...။ ဂါဝန်လေးမပြီး အပြေးတစ်ပိုင်း ကိုယ်သွားလိုက်တယ်...။ ချောက်ကမ်းပါးကြီးရဲ့ ဟိုးးး အောက်ဘက်မှာ ရေတွေစီးနေလိုက်တာ ဖွေးလက်လို့...။ စောစောကအသံကြားရုံနဲ့တင် ရေစီး ဘယ်လောက်သန်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတယ်...။ ခု...တကယ်မြင်ရချိန်မှာ ပိုပြီးတော့တောင်သေချာသွားတယ်...။ ဒါချောင်းတစ်ခုလား....။ မဖြစ်နိုင်ဘူး....။ ပေသုံးဆယ် အကျယ်လောက်သာ ရှိပေမယ့် ဒီလိုရေစီးမျိုးနဲ့ မြစ်တစ်ဆင်းပဲဖြစ်မှာပါ...။ တစ်ဘက်ကမ်းကို လှမ်းကြည့်တော့ လူတစ်ရပ်စာနီးပါး မြင့်နေတဲ့ မြက်ပင်ရှည်တွေက စိမ်းစိုလို့....။ အဲဒီကြားထဲ ဘာပန်းမှန်းမသိတဲ့ အ၀ါရောင်အပွင့်သေးသေးတွေ ကြိုကြားကြိုကြား ပွင့်နေကြတယ်...။ ခုမှ...ကိုယ်သတိထားကြည့်မိတယ်...။ ရေခဲမြစ်ရဲ့ ဟိုမှာဘက်ကမ်း မျက်စိတဆုံးက မြက်ပင်စိမ်းစိမ်းနဲ့ အ၀ါရောင်ပန်းပွင့်တွေချည်းပဲ...။ ကိုယ်ရပ်နေတဲ့ ဒီဘက်ကမ်းမှာတော့ ငွေမှင်ရောင်ဖျော့လေးတွေ လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ တံမြက်စည်းပင်တွေချည်းရယ်.....။ အစိမ်းရောင်မျဉ်းနဲ့ ငွေမှင်ရောင်မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကြားမှာ စီးဆင်းနေတဲ့ ရေဖွေးဖွေးတွေ.....။
လေကြမ်း တစ်ချက်တိုးလိုက်ချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်က...ခြုံပုဝါ အဖြူရောင်လေး.... လေနဲ့အတူ လွင့်သွားတယ်....။ ကိုယ်လိုက်ဖမ်းဖို့မမှီတော့ဘူး....။ သူက လေအရှိန်နဲ့ တစ်ဘက်ကမ်းက မြက်ပင်ရှည်တွေဆီ လွင့်သွားနေတယ်....။ ပုဝါလေးကို ကိုယ်မမှိတ်မတုန် လိုက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာပဲ... ပုဝါအဖြူလေးက .... မြက်ပင်စိမ်းတွေကြားထဲက ဘယ်ချိန်ကထွက်ပေါ်လာမှန်းမသိတဲ့ အဖြူရောင်အရာဝတ္ထု တစ်ခုပေါ်ကို အုပ်မိုးကျသွားတယ်....။ မဟုတ်ဘူး.... ပုဝါလေးက ဖမ်းဆုပ်ခံလိုက်ရတာပါ...။ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အဖြူရောင်ဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ... သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါ....။ ကိုယ်က လိုက်ကြည့်လိုက် မြူခိုးတိုက်တွေက ကိုယ့်မြင်ကွင်းကို ကွယ်သွားလိုက်နဲ့....။ အဖြူရောင်ကတော့ ကိုယ့်ပုဝါလေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ခပ်စိမ်းစိမ်းပြန်လှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ သေချာမမြင်ရပေမယ့် ကိုယ်ခံစားမိနေတယ်....။ ခဏကြာတော့.... မြင်ကွင်းတွေပြန်လည် ကြည်လင်လာတယ်...။ အိုးးး သူ.... သူက ကိုယ့်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အိန်ဂျယ်လေးပဲ....။ ဟုတ်ပြီ.... ကိုုယ်မှတ်မိပြီ...။ ဒီခရီးကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အိန်ဂျယ်ကို ရှာပုံတော်ထွက်လာခဲ့တာပဲ...။ ကိုယ်တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး.... သူ့ကို လက်ဝှေ့ရမ်းပြလိုက်တယ်.....။ ကိုယ့်အပြုံးတွေဖျော့တော့နေမလားပဲ...။ ဒါပေမယ့် သူခံစားသိရှိနိုင်မှာပါ....။
သူကတော့ ကိုယ့်ကိုမသိတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ခပ်စိမ်းစိမ်း ကြည့်မြဲကြည့်နေဆဲပါပဲ....။ ကိုယ်....လက်ဖ၀ါးနှစ်ဘက်ကို အုပ်ပြီး... “အိန်ဂျယ်....ရေ”လို့ အော်ခေါ်လိုက်တယ်...။ ကိုယ့်အသံတွေလည်ချောင်းထဲကနေတောင် ထွက်မလာကြဘူး...။ ထိတ်လန့်တကြားနဲ့ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းပေါ်လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ အုပ်မိတယ်...။ ဘုရားရေ.... ကိုယ့်အသံတွေဘယ်ပျောက် ကုန်ပြီလဲ...။ ကိုယ်ထပ်ပြီး ကြိုးစားခေါ်ကြည့်တယ်....။ နိုးးး.. အသံတွေက ထွက်မလာပြန်ဘူး...။ ပါးပြင်ပေါ်မှာ နွေးခနဲ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်...။ ကိုယ်လှမ်းကြည့်နေဆဲမှာပဲ အိန်ဂျယ်က ကိုယ့်ပုဝါအဖြူလေးနဲ့အတူ မြက်ပင်ရှည်တွေကြားထဲကနေကွယ်ပျောက်သွားတယ်...။ ဟိုဘက်ကမ်းကို ကိုယ်ဘယ်လိုကူးသွားရမလဲ တံတားများရှိမလားလို့ အမောတကောနဲ့ လိုက်ရှာကြည့်တယ်...။ ဟင့်အင်းး...ဘာတံတားမှမရှိဘူး... ဘာနွယ်ကြိုးမျှင်မှလဲ မတွေ့ရဘူး...။ အသက်ရှူလဲ ကြပ်လာပြီ...။ အာခေါင်တွေလဲခြောက်လာပြီး....။ ပြီးနောက် လောကကြီးတစ်ခုလုံးအမှောင်ထုတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီ...။
Posted by coral nyo at 21:485comments:
Posted by coral nyo at 23:57 No comments:
မနေ့ညက(၂၄.၃.၂၀၁၁) ရှစ်နာရီနှစ်ဆယ့်ကိုးမိနစ်မှာလှုပ်သွားတဲ့ ငလျင်တစ်ခုကြောင့် ကျမရဲ့ ဇာတိမြို့ကလေးဖြစ်တဲ့ တာလေမြို့တစ်မြို့လုံး ပြားပြားဝပ်တလင်းပြင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်...။ ငလျင်ရဲ့ ပြင်းအားက7 ရစ်ခ်ျတာစကေးရှိပါတယ်...။ ကျမငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့အိမ်လည်း အုတ်ပုံပဲကျန်ပါတော့တယ်...။ အိမ်စောင့်ပေးတဲ့ ဦးလေးလင်မယားလည်း အထဲမှာပိတ်မိပြီး ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ကြားပါတယ်...။ ကျမတို့အဖိုးကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ တာလေနဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ နားယောင်းမှာနေထိုင်ပါတယ်... ။ အဖိုးကလေလည်းဖြတ်ထားပါတယ်..။ အဖိုးနေတဲ့အိမ်က ဘာမှဖြစ်မသွားပေမယ့် အိမ်ဘေးကပ်လျက်ကတော့ လုံးဝကိုပြိုကျသွားတယ်တဲ့...။ တော်တော်ရင်နာစရာကောင်းမယ့် မြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်မှာပဲ....။ တာချီလိတ်ဘက်ကိုကူးတဲ့ တာလေချောင်းတံတားလည်း ကျိုးသွားပါတယ်...။ သေတဲ့သူ အယောက်နှစ်ဆယ်ကျော်သွားပြီလို့ ဖုန်းအဆက်သွယ်အရသိရပါတယ်...။လောလောဆယ်တော့ ဒဏ်ရာရလူနာတွေကို တာချီလိတ်နဲ့ ကျိုင်းတုံဆေးရုံဆီ အသီးသီးတင်ထားတယ်လို့သိရတယ်...။ ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ ကယ်ဆယ်ရေးက လောက်လောက်ငင မရှိလေတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထပဲလုပ်ကြရတယ်....။
ခုတော့ တာချီလိတ်ကိုသွားမယ့် လေယာဉ်တွေလည်းအရမ်းကျပ်နေပါတယ်....။ အကုန်လုံး ကိုယ့်အမျိုးရှိရာ ပူပန်ပြီး သွားချင်ကြတော့ ဂိုးရှိုးပဲဆင်းပြီး စီးကြတယ်လို့ပြောတယ်...။ ကျမညီမလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းက ကျမတို့အိမ်ရှေ့တည့်တည့်ကပါ သူ့အမေ အစ်ကိုနဲ့အဖိုးက အိမ်ပိပြီး အသက်ပါသွားပါတယ်... အဖေကတော့ ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရလို့ဆေးရုံတင်ထားရသတဲ့...။ ကြားရတာတွေကတော့ စိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲ....။ အဲဒီဘက်ကိုသွားရမယ့် ခရီးလမ်းကလည်း အလှမ်းဝေးလေတော့..... ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားပြီး ကူညီချင်တဲ့စိတ်က စိတ်ထဲကိုပဲ ခါးသီးစွာပြန်မျိုသိပ်ထားရတယ်....။ ကျမတတ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အလှူငွေကောက်ခံပေးတာမျိုး....။ တကယ်ဆို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားပြီး ပြုစု ထမင်းထုပ်တွေသွားဝေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ....။ ခုချိန်မှာ ကိုယ့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်က... ဘာမှမရှိတော့သလို ခံစားရတယ်....။ မသိတော့ဘူးဗျာ..........။ ၀မ်းနည်းတာပဲသိတယ်..........။
Posted by coral nyo at 03:53 10 comments:
Posted by coral nyo at 05:45 11 comments:
ကျမရဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲညီမလေး လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝေပေးနေတာ
အိတ်ထဲမှာခဲတံ စာအုပ် မိုးကာအကျီ ထီး ကလေးသွားတိုက်ဆေး
့တပေါင်းလပြည့်နေ့ ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာ ကျမ ကလေးတွေဆီကို ကြက်ဆီထမင်းနဲ့ အချိုရည်ဗူးလေးတွေ ဒါနသွားပြုခဲ့ပါတယ်...။ ကျမညီမလေးကတော့ ကလေးတွေကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ လှူခဲ့တယ်...။ နောက်...ခုနေတဲ့ အိမ်က အပြင်အဖီချထားတာ တာလပတ်မိုးနဲ့ပဲဆိုတော့ မိုးရွာရင်မိုးတွေယိုပါတယ် ပြီးတော့ ကလေးတွေထမင်းစားတဲ့ နေရာက တမံတလင်းဖြစ်နေတော့ အေးတယ် ဘုရားရှိခိုးလဲ ဒီနေရာ.... စာကျက်လဲဒီနေရာ.... အိပ်လဲ ဒီနေရာဆိုတော့ ကွပ်ပျစ်ကလေးလုပ်ချင်တယ်လို့ ဆရာမကပြောပြပါတယ်...။ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲက လိုအပ်တာသူအကုန် လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်...။ နောက်တစ်ပတ်သွပ်မိုး မိုးပေးမယ် ကွပ်ပျစ်ရိုက်ပေးမယ်...။ ဆယ်တန်းဖြေထားတဲ့ ကလေးသုံးယောက်ကို စက်ရုံမှာ အလုပ်ခန့်ပေးမယ်....။ သိပ်ကို ကုသိုလ်ရတဲ့ အလုပ်ပါ....။ ကျမကတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကူညီဖို့ မတတ်နိုင်ပေမယ့် တကယ်ကူညီနိုင်မယ့်သူကိုတော့ ရှာပေးနိုင်ခဲ့လို့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်...။ မနှစ်ကတည်းက ကလေးတစ်ယောက် 15နှစ်ကောင်မလေး မွေးကတည်းကစအိုမပါလာလို့ ကလေးဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ကုသစရိတ် အစအဆုံးကူညီပေးခဲ့တာလဲ အဲဒီညီမလေးပါပဲ...။ ကလေးမပုံကိုတောင် သီးသန့်မရိုက်ခဲ့မိဘူး...။ ကလေးတွေအများစုက မိဘမရှိကြတာမဟုတ်ဘူး မိဘတွေက အိမ်ထောင်ကွဲပြီး ကလေးကို တာဝန်မယူနိုင်ကြတော့လို့ လာပစ်ထားတာ ...။ တော်တော်ရင်နာဖို့ ကောင်းပါတယ်....။ ကျမအဲဒီကလေးတွေဆီကို စရောက်တုန်းကလိုပဲ ကျမညီမလေးကလဲ ကလေးလေးတွေကို သနားလို့တဲ့ မျက်ရည်ကျတယ်...။
ကိတ်နာမည်လေးတွေကို ဘယ်ညာအပေးအောက်အစဉ်လိုက် ရေးပေးမယ်
Black Sesame Seed, Lime, Vanilla, Rainbow, Red Velvet and Chocolate
Sydney's Cup Cake ကိတ်သားကချောကလက် topping က
နှမ်းမဲတွေကိုကြိတ်ပြီး ထောပတ်နဲ့လုပ်ထားတာ မွှေးတေးတေးနဲ့စားကောင်းတယ်
မနက်ကလေထဲမိုးထဲ ဈေးထဲမှာ အဲဒီရွှေပဲညွှန့်ကိုထိုင်သင်နေခဲ့တာ
အဟဲ....ပိုက်ပိုက်ပေးစရာမလိုဘူး ရောင်းတဲ့အုပ်စိုးက အလကားပေးလိုက်တာ
အမမွေးနေ့အတွက်စပွန်ဆာတဲ့ ဈေးထဲကအမတွေညီမတွေကို ဒံပေါက်ဝယ်ကျွေးဖြစ်တယ်
Posted by coral nyo at 00:02 15 comments:
မိန်ရာသီ ကာလတစ်ခု ပေါက်ခဲ့ပြီပေါ့ ။
နွေဦးကို အကြိုထောက်တယ် ထင်ပါ့
သူတို့ ခရီးပေါက်မှုကို ပြသခဲ့ပြီ။
ရေကြည်လို အေးမြပါစေသား ...။
(၁၇.၃.၂၀၁၁ မှာ ကျရောက်သော မမီး (မမိုးငွေ့) နှင့် ကြယ်တွေနဲ့ စံပယ်ကို မြတ်နိုးသူ တစ်ယောက် အတွက် ဤကဗျာလေးကို ရေးဖွဲ့ပါသည်)
မောင်လေးကိုတူးမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ....။ အိန်ဂျယ်ဆိုတာလေးပါလို့ သိပ်ကို သဘောကျပါတယ်....။ ကျမကစိတ်ကူးယဉ်နတ်သမီးလေးကိုးးး မဟုတ်လား....။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုတူးရေ...။ တကယ်တော့ကျမမွေးနေ့ကို သူဘာကြောင့်မှတ်မိနေသလဲဆိုတာ လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတစ်ခု ရှိနေတယ် သိချင်ရင်တော့ ညလင်းအိမ်ဘလော့ဂ်မှာသွားပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ကြေငြာမောင်းခတ်အပ်ပါသည်ပေါ့....။
Posted by coral nyo at 22:583comments:
Posted by coral nyo at 00:096comments:
မော်တင်လမ်းဒေါင့်က ကုန်တိုက်သစ်မှာ ပန်းစွယ်တော်က ယိုးဒယားပင်လယ်စာ ခေါက်ဆွဲကြော်... အပေါ်ကထမင်းပေါင်းနဲ့ အရသာတူတူပဲ ခေါက်ဆွဲနဲ့ထမင်းပဲကွာသွားတာ။
စပ်တော့ အအေးမှာသောက်ကြတယ် နာနတ်နဲ့ ဖရဲသီးဖရို့စ်တဲ့
ချောင်းသာ Belle Myanmar Resort က မနက်စာဘူဖေးလေးပါ....အစုံတော့ကျွေးတယ် ကိုယ်ရိုက်ထားတာသာ မစုံဖြစ်သွားတာ...။ ပဲပြုတ်ဆီထမင်း ပဲကြာဇံကြော်နဲ့ ပုဇွန်တန်ပူရာ....။ တခြား ကောက်ညှင်းပေါင်း နှမ်းထောင်းနဲ့ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ် ကြက်ဥကြော်... ဘာညာသာရကာတွေ ရှိသေးတယ်...။ အအေးသုံးမျိုးပါတယ်... အဟဲ...အတင်းနည်းနည်းတုတ်လိုက်ဦးမယ်.... ညကအဆိုတော်ကလေးတွေ ရေသန့်မလောက်လို့.... အဲဒီအအေးလေးတွေတစ်ယောက်ကို ရှစ်ခွက်ဆီသောက် ကြတယ်ဆိုပဲ....။ သူတို့အတန်ဆုံး...။
ဒါက ဆန်ပြုတ်... ငါးခြောက်နဲ့ မြေပဲဆံလှော်နဲ့ ဘဲလ်မြန်မာက မနက်စာဘူဖေး....။ အစာကြေတယ် ရင်ချောင်တယ်..........လို့မထင်နဲ့ပြောတာ....။ ဒီလောက်အစားပေါင်းစုံကို တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲထယူမှတော့ ဆန်ပြုတ်ဆို အူမကပ်ပေါင်....။
မြိတ်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကပဲ မြိတ်ငပျောကြော်ပေါ့....။ ငပျောသီးကိုချေပြီး အုန်းသီးဖတ်တွေနဲ့ ဂျုံသကြားရောနယ်ပြီး ကြော်ထားတာ ငါးဖယ်ကြော်ဝိုင်းလိုပါပဲ....။ အုန်းသီးနံ့မွှေးပြီးစားကောင်းတယ်...။ အမလေးနော် ၀ိတ်တော့ကျတော့မှာပဲ...ငါ့နှယ့်.....။
တစ်နေ့က ရုံးကအပြန် ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်ရှေ့က ရှမ်းဆိုင်မှာ မြီးရှည်တစ်ပွဲတွယ်ပစ်လိုက်တာများ ငရုတ်သီးစပ်စပ် ရှမ်းချဉ်ဖတ်နဲ့ တရှူးရှူးတရှဲရှဲကောင်းလိုက်ပုံများမပြောပါနဲ့....။
မြိတ်မုန့်ဟင်းခါး...။ မီးမီးတို့ အိမ်မျက်စောင်းထိုးမှာရောင်းတယ် အရမ်းကြိုက်လို့ တစ်ပတ်ကို နှစ်ခါသုံးခါလောက်ဝယ်စားဖြစ်တယ်...။ ဟင်းရည်ကျဲကျဲပေမယ့် မုန့်ဖတ်နဲကောက်ညှင်းထည့်စားတော့ အရည်နည်းနည်းပစ်ပစ်လေးဖြစ်သွားတယ်...။ ငပျောအူနုနုအကွင်းလိုက်တွေကလဲစားလို့ကောင်းတယ်... အီကြာကွေးကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုဝယ်ထည့်တာ...။
ခုချိန်က စတော်ဗယ်ရီသီးတွေပေါတဲ့ချိန်.... အအီပြေလေး...အချိုလျှော့ထားတယ်.... ချဉ်ချဉ်မွှေးမွှေးနဲ့မို့ သောက်လို့ကောင်းတယ်...။
Posted by coral nyo at 22:565comments:
လည်မှာ စည်းထားတဲ့ အဖြူရောင်ပုဝါစလေးက နှင်းငွေ့တွေရောပါနေတဲ့ လေအေးနဲ့အတူ... ကိုယ့်ပါးပြင်ကို ပွတ်သပ်နေကြတယ်...။ ရာသီဥတုက မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုလုံး နှင်းဇာပ၀ါချတာခံထားရတယ်..။ လှိုင်းလုံးဖွေးဖွေးတွေကတော့ ထွက်ပြေးသွားလိုက် သောင်ပြင်ကို ပြေးလာရိုက်ခတ်လိုက်နဲ့ မမောပန်းနိုင်အောင်ပါပဲ...။ ဟိုးးး.......မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဆီက... ပုဇွန်ဆီရောင်နေလုံးကြီးကတော့ တအိအိနဲ့ထွက်လာဖို့ အားယူနေဆဲ...။ သိပ်မကြာခင်... နှင်းဇာပ၀ါချထားတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုလုံး ရွှေရောင်ပါးပါးလေးတွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတော့မှာ...။
သိပ်လှတဲ့ လောကသဘာဝရဲ့ တဖြေးဖြေးချင်း အရောင်ပြောင်းလဲမှုကို ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်...။ ယုန်မွှေးအနွေးထည် ခပ်ပါးပါးဝတ်ပြီး အေးစိမ့်တဲ့ ဒဏ်ကို လက်ပိုက်ပြီး နွေးထွေးမှုယူမိတယ်...။ အေးစက်တဲ့ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကို နွေးထွေးတဲ့ လက်ဖ၀ါးနှစ်ခုလာအုပ်ထားပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ကူးမိတယ်...။ ကိုယ့်စိတ်ကူးကို အကောင်ထည်မဖော်နိုင်မှန်းလည်းသိနေတယ်...။ ဘာဖြစ်လဲလေ... သဘာဝအလှနဲ့ ကိုယ်အနွေးဓါတ်ယူလို့ရသားပဲလို့ ဖြေသိမ့်လိုက်တယ်...။ သီချင်းသံလေးတစ်ခုကိုကြားရတော့ မနက်စောစောစီးစီး ဘယ်သူကများ ဂီတာတီးကြသလဲလို့ စပ်စုလိုက်တော့ မလှမ်းမကမ်းမှာ လူငယ်တစ်စု မနက်ခင်းကို သီချင်းသံချိုချိုနဲ့ ကြိုဆိုနေကြတာကို တွေ့လိုက်တယ်...။ မင်္ဂလာပါ....မနက်ခင်းလေးရေ.... မင်းကို ကိုယ်အားကျလိုက်တာ... မင်းကို ကြိုဆိုမယ့်သူတွေက သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှုဒေါင့်တွေနဲ့ ကြိုဆိုကြတယ်..။ ကိုယ်ကတော့ .............ကိုယ်ကတော့ဖြင့် အဲလို ကြိုဆိုမယ့်သူ မရှိပါလားလို့ သိမ်ငယ်စိတ်ကလေးဝင်သွားမိတယ်...။ ဟော.........နေလုံးကြီး ပီပီပြင်ပြင်ထွက်လာပြီ.... ။ တ၀မ်းတခါးအတွက် လှုပ်ရှားသွားလာသူတွေလဲ ကမ်းခြေမှာ လူးလားခေါက်ပြန် လျှောက်နေကြပြီ...။ လှိုင်းလုံးကြီးတွေကတော့ ပုတ်ခတ်ဆဲ....။ ငှက်တချို့လဲ အစာရှာထွက်လာကြပြီ...။ မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ သက်မဲ့တွေနဲ့အတူ မလှုပ်ရှားတဲ့ သက်ရှိကိုယ်တစ်ယောက်တည်း...။
သိပ်လှတဲ့ ရွှေရောင်နံနက်ခင်းလေးကို အမှတ်တရတစ်ခုခု ကိုယ်ပေးခဲ့ချင်တယ်...။ အဲဒါကတော့ သဲသောင်ပြင်ပေါ်က ကိုယ့်ခြေရာလေးတွေပါပဲ...။ ကိုယ့်အမှတ်တရတွေကို လှိုင်းလုံးတွေလဲ ယူဆောင်တိုက်စားသွားနိုင်ကြသလို ...နေခြည်နုနုလေးတွေကလဲ ထိတွေ့ယူငင်သွားနိုင်ပါတယ်..။ ကိုယ့်ရင်ထဲက အလွမ်းတွေကိုသာ... ဘယ်သူတစ်ယောက်ကမှ နှုတ်ယူသွားနိုင်စွမ်း မရှိလောက်အောင်...သူ “အမှတ်တရ”ပေးခဲ့တာ.............။
Posted by coral nyo at 02:245comments:
“ပုလင်းထဲက နတ်သမီး .... ပုလင်းထဲက နတ်သမီး” ဆိုပြီး သီချင်းတွေထဲမှာဆိုတာ ခဏခဏ ကြားဖူးနေတယ်....။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတောင်ပံလေးနဲ့ လင်းလက်နေမယ့် နတ်သမီးလေးကို ကြည်လင်တဲ့ ဖန်ပုလင်းတစ်လုံးထဲမှာ ရှိနေတာကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်မိပါတယ်...။ အိန်ဂျယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ နတ်သမီးရယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်တာ မဟုတ်ပါဘူုး...။ ဘုရားသခင်ရဲ့ တမန်တော် messenger တွေကိုလဲ အိန်ဂျယ်လို့ခေါ်ပါသေးတယ်...။
ကိုယ့်ရဲ့ အိန်ဂျယ်လေးကိုလဲ အတောင်ပံတပ်ပြီး ...အဲလို ဖန်ပုလင်းလေးထဲထည့်ထားရင် သိပ်ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်...။ “ဟာဗျာ.....ဘယ်ဖြစ်မလဲ ဖန်ပုလင်းထဲမှာ အသက်ရှူကြပ်မှာပေါ့”တဲ့...။ သူ့ကို ကိုယ်ချက်ချင်းလက်တန်းပုံဆွဲပြတော့ ... သူတစ်ချက်စဉ်းစားသေးတယ်...။ ဖန်ပုလင်းထဲမှာ သူက texido ၀တ်စုံနဲ့ ကားရားလေး....။ ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်...ဟ..ဟ...။ “မမ..ရဲ့ ဖန်ပုလင်းက Air-con ပါလား”တဲ့...။ ကြံကြံဖန်ဖန် ကိုယ်က ဖန်ပုလင်းကို ဘယ်လိုလေအေးစက်တပ်ရမတုန်း....။ အိုကေ... ဒါဆို ပုလင်းအဆို့လေးကို ဖွင့်ထားပေးမယ် ...။ အသက်ရှူမကြပ်တော့ဘူးပေါ့... မဟုတ်လား...။ “မမ...ဖန်ပုလင်းကနှစ်ယောက် မဆန့်ဘူးနော်”လို့...သူက အထွန့်တက်သေးတယ်....။
ကိုယ်စိတ်ကူးရသွားတယ်...လာမယ့် Holloween ညကျရင် သူ့ကို ဘယ်သူမှမ၀တ်ဖူးသေးတဲ့ အိန်ဂျယ်ဝတ်စုံလေး ထွင်ပေးမယ်..။ ကိုယ်...သူ့ဒီဇိုင်နာလုပ်ပေးမယ်...။ ကိုယ်ကတော့ ငွေရောင်ဆံပင် ဖိတ်ဖိတ်လက်...မျက်လုံးစိမ်းဖန့်ဖန့်နဲ့ ဖြူဆွတ်ဆွတ်အသားအရေ သေမင်းရဲ့ တမန်တော်လုပ်ရင် ကောင်းမလားလို့...။ “မမ..ကဘာလုိ့ အဲလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကိုကြိုက်ရတာလဲ တကယ်ဆို ကျနော့်ရဲ့ အိန်ဂျယ်လုပ်ရမှာလေ..”...။ သူဒီလိုပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိသားပဲ...။ “မင်းအတွက်... နတ်သမီးမမွေးသေးဘူး” “မင်းသိပ်လိုချင်ရင်တော့ ကိုယ်ရှာပေးမယ် မင်းအတွက် သိပ်လှတဲ့ နတ်သမီးပိစိကွေးကလေး”...။ “ကျနော် ဒီလောက်ဆိုးတာ... အိန်ဂျယ်တွေနဲ့လဲမထိုက်တန်ပါဘူး”..“အိုးးး ဘာလို့ အဲလိုတွေးသလဲ...လူလူချင်း မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး... မင်းကလိမ္မာတာပါ...ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုးတယ်လို့ သိလိုက်ကတည်းက လိမ္မာပြီးနေပါပြီ”...။ ကိုယ့်အိန်ဂျယ်လေးက ကိုယ်နဲ့စကားပြောရင် တခါတခါ အဲလိုလေး အားငယ်စိတ်ဝင်တတ်သေးတယ်..။ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အိန်ဂျယ် အမြဲတက်ကြွ လန်းဆန်းနေတာမျိုးပဲ မြင်ချင်တယ်...။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိနေသည် ဖြစ်စေ... အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ... အိန်ဂျယ်လေး အားဖြစ်စေမယ့် စကားမျိုး အပြုအမူမျိုး အကြည့်မျိုးပဲပေးတတ်တာ...။
ကိုယ့်ရဲ့ အားပေးစကားသံတွေဟာ... သူ့အတွက် အမြဲတမ်းခွန်အားဖြစ်စေသလို... ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းတွေဟာ လည်း... သူ့ကိုနွေးထွေးမှုအပြည့်အ၀ပေးစွမ်းမယ်...။ နောက်ဆုံး... ကိုယ့်အကြည့်တွေက တစ်ဆင့် အလင်းဓါတ်တွေဟာ အိန်ဂျယ်ရဲ့ အတောင်ပံတွေကို လိုရာခရီးရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးဦးမှာပါ...။
ရှူးတိုးတိုးးး... ကျေးဇူးပြုပြီး အိန်ဂျယ်ကို သွားမပြောကြပါနဲ့နော်...။ ကိုယ်ဘာကြောင့်သူ့ကို ဖန်ပုလင်းထဲ ထည့်ထားချင်သလဲဆိုတာ......။
Posted by coral nyo at 23:442comments:
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာ အဖြူရောင်လေးနဲ့စခဲ့တယ်လို့ ကိုယ်ကောက်ချက်ချချင်ပါတယ်....။
တနင်္ဂနွေရဲ့မိုးပြာရောင်ကောင်းကင်အောက်မှာ....အရောင်စုံတွေကြားကမှ... ကိုယ်.....အဖြူရောင်လေးကို ရွေးချယ်မြင်တွေ့မိတယ်....။ ကြယ်တွေစုံတဲ့ နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်နောက်ခံနဲ့ အဲဒီတနင်္ဂနွေညမှာလဲ အဖြူရောင်လေးကို...ကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြားခဲ့ရတယ်....။ ညလေပြေနဲ့အတူ....ကိုယ့်ဆီကို အဖြူရောင်လေး ပျံ့လွှင့်လာခဲ့တယ်....သာယာတဲ့ ဂီတသံတချို့နဲ့ပေါ့...။အဖြူရောင်သံစဉ်တွေနဲ့ တိမ်စိုင်တချို့ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲထိ အလည်ရောက်လာတတ်တယ်...။ ကိုယ်အဝေးကပဲငေးမောကြည့်ပါရစေ...။ အဖြူရောင်တွေ စွန်းထင်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ...။
ဟုတ်တယ်....မင်းဆီမှာ မမြင်ရတဲ့ အဖြူရောင်ရော မြင်ရတဲ့ အဖြူရောင်ရောရှိနေတယ်...။ မင်းအမြဲရှပ်အကျီင်္ အဖြူလေးတွေဝတ်တတ်တာ...ကိုယ်မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်တိုင်းမှာပေါ့..။ ပြီးတော့ မင်းဆီမှာ ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ ဖြူစင်တဲ့အပြုံးတွေကို သူများတွေထက် ကံကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ထား သေးတယ်..။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ မင်းရဲ့စိတ်ထားတွေကအစ ဖွေးလက်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်... ။ ကဲ...ဒီလိုအဖြူရောင်တွေကို မင်းပိုင်ဆိုင်ထားနေမှတော့ မင်းလောက်ကံကောင်းမယ့်သူ ရှိဦးမလား လောကမှာ...။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်...တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဲဒီအဖြူရောင်နှလုံးသားကို တစ်စုံတစ်ဦး အရောင်ဆိုးပစ်လိုက်မှာကို မင်းတော့မသိဘူး ကိုယ်ကတော့ မင်းကိုယ်စားစိုးရိမ်ပူပန်နေမိ တော့တယ်...။ တခါတလေ မင်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးပြုစုထားတဲ့ အဖြူရောင်ပန်းပွင့်ကလေးတစ်ပွင့်လို တခြားသူတွေ ဆွတ်ခူးသွားမှာကိုလဲ ကြောက်တဲ့အထိ ဖြစ်ရတယ်...။ ကိုယ့်ရဲ့ အဖြူရောင်အတ္တကို မင်းကတော့ဖြင့် သိတောင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူး...။
ကိုယ်နဲ့စကားပြောတိုင်း....အမြဲရယ်မောပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ မင်းကို...ကိုယ်မကြာခဏငေးမောကြည့်မိတယ်...။ ကိုယ်တို့အကြည့်ချင်းဆုံဖြစ်သွားတဲ့ အခါမျိုးဆို မင်းက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ အပြုံးချိုချိုတွေနဲ့တုန့်ပြန်တတ်တဲ့အခါ ကိုယ်ကတော့ မလုံမလဲကိုယ့်အကြည့်တွေအတွက် အားနာသွားရတယ်...။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် အဝေးတစ်နေရာကပဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ငေးမောကြည့်ရတာကို ပိုနှစ်သက်မိတယ်...။ အဖြူရောင်ဆိုတာ ညစ်ပေလွယ်တယ်လေ...။ ကိုယ့်လက်ဖျားနဲ့မပြောနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးနဲ့တောင် အရောင်တွေ စွန်းထင်းသွားမှာစိုးလှတယ်...။ အစကတည်းကအဖြူရောင်....နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိလည်း မင်းကို အဖြူရောင်ဆွတ်ဆွတ်နဲ့ပဲမြင်ချင်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အဖြူရောင်အတ္တပါးပါးလေးကို တခါတခါတော့ မင်းကို သိစေချင်လိုက်တာ.....။
ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်နဲ့ အဖော်လုပ်ခဲ့တဲ့ညကို ကိုယ်ဘယ်တော့မှာ မေ့မယ်မထင်ဘူး...။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြူရောင်လေးက...ကိုယ့်ရှေ့မှာ အပြုံးတွေနဲ့အတူ ညရဲ့အလှကိုဖြည့်စွက်ပေးခဲ့လို့လေ...။ အရောင်တွေစုံတဲ့ လောကကြီးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးနောက်...အဖြူရောင်ဟာ...ကိုယ့်စိတ်ကို ပိုပြီးကြည်လင်စေ ခဲ့တယ်....။ အဖြူရောင်ကိုပိုပြီးလဲ တွယ်တာလာမိတယ်...။ ကိုယ့်အတွေးတွေကိုရော ကိုယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကိုပါ အဖြူရောင်က အေးချမ်းမှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်...။ ခရုအသေအကြေတွေရဲ့ အခွံတွေစုဝေးရာ အဲဒီကျွန်းကလေးမှာ အဖြူရောင်လေးနဲ့အတူ ခရုတွေကောက်လို့ ထုံးဖြူဖြူသုတ်ထားတဲ့ စေတီမှာ အတူဘုရားဖူးခွင့်လေးရဖို့ ကိုယ်စိတ်ကူးမိပေမယ့်.....တကယ့်အပြင်လက်တွေ့မှာတော့ အပူရောင်တွေနဲ့ လူကမအေးချမ်းလှပါဘူး...။ အမှောင်တစ်ခြမ်းဖုံးနေတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ထဲကို အဖြူရောင်လေးရောက်လာဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တောင် မမက်ဝံ့ပါဘူးကွယ်...။ အဖြူနဲ့အမဲဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်နှစ်ခုပါ... ။ ဘယ်လိုမှ ပေါင်းစပ်လို့မရတဲ့အရောင်တွေပါ...။
ကိုယ့်တော့ အဖြူရောင်လေးကို...ဟိုးးး....အဝေးကပဲ....အမောပြေလှမ်းကြည့်ရတဲ့ ပီတိမျိုးနဲ့ပဲ ရင်မှာကျေနပ်စွာ ပိုက်ထွေးရင်း...အဖြူရောင်လေး တစ်ချိန်ချိန်မှာ ညစ်ထေးစွန်းထင်းသွားမှာကိုပဲ စိုးရိမ်ကြီးစွာရှိနေတော့တယ်...။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ......ကဲ.....။
Posted by coral nyo at 23:402comments:
Posted by coral nyo at 03:554comments: